Ground Interview | National Enlightenment Institute (NEI)
Ground Interview – Fisheries Sector – NEI – COVID Economic Relief Plan (CERP)
“ကိုဗစ်ဂယက်ကြောင့် ငါးဈေးကွက် ပျောက်နေ ” မွန်ပြည်နယ်က ထွက်ရှိနေတဲ့ ရေထွက်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ ငါးတွေကို တရုတ်နိုင်ငံကို ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးထိ တင်ပို့ရောင်းချနေရတာပါ။ အခုအခါ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံက ငါးအဝယ်မရှိလို့ ငါးလုပ်ငန်းရှင်တွေ အခက်ကြုံနေတာပါ။ ထွက်ရှိနေတဲ့ ရေသယံဇာတပစ္စည်းတွေကို ....
Ground Interview – Rice and Paddy Sector – NEI – COVID Economic Relief Plan (CERP)
“ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါနဲ့ ဆန်စပါးကဏ္ဍ အခက်အခဲ” မွန်ပြည်နယ်ဟာ စပါးစိုက်ဧကပေါင်း (၇) သိန်းကျော် ရှိနေတဲ့ ပြည်နယ် တစ်ခုဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ် စပါး တင်ပေါင်းသိန်း (၄၃၀) ကျော် ထွက်ရှိနေတာပါ။ တဖက်မှာတော့ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲလာမှုနဲ့အတူ မျိုးစပါးအရည်အသွေး ....
Ground Interview – Rubber Sector – NEI – COVID Economic Relief Plan (CERP)
” တရုတ်ဈေးကွက် တစ်ခုတည်းကို မှီခိုနေရတဲ့ ရော်ဘာကဏ္ဍ နလံထူဖို့ အကူအညီ လိုအပ်နေ” မွန်ပြည်နယ်ဟာ ရော်ဘာစိုက်ဧကပေါင်း (၅) သိန်းကျော် ရှိနေတဲ့ ပြည်နယ်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ် ရော်ဘာတန်ချိန် (၁) သိန်းကျော် ထွက်ရှိနေပါတယ်။ ....
Ground Interview – Livestock Sector – NEI – COVID Economic Relief Plan (CERP)
“ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါဟာ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအပေါ်မှာလည်း သက်ရောက်မှု ကြီးမားနေ” မွန်ပြည်နယ်မှာ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းကို မြို့နယ် ၁၀ မြို့နယ် စလုံးမှာ လုပ်ကိုင်နေကြတာပါ။ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းမှာတော့ ကြက်၊ ဝက် ၊ ဘဲနဲ့ ငုံးတို့ကို အများဆုံး ....
Ground Interview – Salt Sector – NEI – COVID Economic Relief Plan (CERP)
#Unicode# “ကိုဗစ်ကြောင့် ဆားတောင်သူတွေ ဆား ရောင်းဖို့ပင် အခက်အခဲ ရှိနေ” #မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ နေလှန်းဆားကို ပေါင်မြို့နယ်၊ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်နဲ့ ရေးမြို့နယ်တို့မှာ အဓိက ထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ ဂယက်ကြောင့် ဆားဈေးနှုန်း ထက်ဝက်ကျော် ကျဆင်းလာမှုနဲ့အတူ ....